Farxad #dhaafis iyo #xikmad la’aan | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 24, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markaan dib u jaleeco sanadkii la soo dhaafay, ma ahan wax ka yaab badan. Mahadcelintu runtii maahan maalin fasax ah iyada oo aan marka hore Ilaah la mahadin… allaa mahad leh! Runtii waad barakaysay aniga iyo qoyskaygaba sanadkan. Wiilkayga iyo gabadhaydu waa hadiyadaha ugu waaweyn ee aan abid helo intaan noolahay. Mar walba ma ihi aabaha adduunka ugu fiican - mararka qaar fursado ganacsi darteed ayaan u lumiyaa - laakiin kama qaadi karto sida aan dareemayo. Haddii aan waayo dhammaan berri, carruurtaydu wali wejigayga ayey dhoola cadeynayaan.
Waxaan bilaabay inaan qoro liistada dadka iyo ganacsiyada si aan ugu mahadceliyo sannadkan waxayna si daacadnimo leh u cabsi gelisay aniga aniga of ka dib qiyaastii 50, waxaan bilaabay dhidid inaan iska ilaabo qof! Waxaa jira koox asxaab ah oo aan la shaqeeyo oo ay tahay inaan xuso, oo uu ku jiro Adam Small oo ka yimid Mobilada isku xidha, Mark Ballard ee Bark Mallard iyo Jason Carr oo ka socda Koobka Bean. Waxaan lashaqeynayay nimankan maalin kasta bilihii lasoo dhaafay wayna igu farxeen, waqti adag ayey isiinayeen, waxayna igu dhiirrigeliyeen inaan sameeyo wax ka siiweyn oo ka sii wanaagsan. Ku hareeraysan adiga oo leh dad wanaagsan mar walbana waad guuleysan doontaa.
PS: Mark wuxuu dib ugu noqonayaa San Diego kadib Thanksgiving. Mark ayaa la tabi doonaa waana ka xumahay inaannaan meheraddiisa ka kicin oo aan ku guuleysanno halkan Indianapolis… waxay ahayd sanad aad u xun oo aad u tiro badan.
Sida had iyo jeer, baloog ma aha wax badan oo dhexdhexaad ah illaa ay dadku dhageystaan ​​oo ay ka qaybgalaan mooyee. Waxaan ugu mahadnaqayaa akhriska joogtada ah ee sii kordhaya Martech Zone iyo qorayaasha cusub ee halkan ku soo bandhigay qoraallo tayo leh iyo codad kala duwan.
Ma qaban karo qoraalkan aniga oo aan u mahadcelin Chris Baggott iyo Isku-darka. Ma awoodi lahayn inaan furo ganacsigan la'aanteed taageerada ay bixiyeen. Waad ku mahadsan tahay Kyle Lacy gogol dhigga Wiley oo markii dambe isu beddelay buugga aan qorayo. Iyo, dabcan, mahadsanid Chantelle Flannery ka caawinta qoritaanka buugga!
Iyo Ugu Dambayn
Thanks to Ryan Cox yaa fikraddan u soobandhigay dadyowga si ay lacag ugu ururiyaan #Tweetsgiving. TweetsGiving waa dabbaaldeg caalami ah oo lagu doonayo in lagu beddelo adduunka iyada oo loo marayo awoodda mahadnaqa.
Nofeembar 24? 26, 2009, dhacdadan 48-saacadood ah ee ay abuurtay US non-profit Epic Change ayaa ku dhiirigalin doonta kaqeybgalayaasha inay muujiyaan mahadnaqa iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka iyo dhacdooyinka tooska ah Martida waxaa lagu casuumi doonaa inay siiyaso arin guud munaasabadaha lagu qabto daafaha aduunka si loo maamuuso dadka iyo waxyaabaha ka dhigaya inay mahadceliyaan.
Kuwa idinka ah Indianapolis, joogso Scotty's Brewhouse caawa gudaha magaalada Indianapolis halkaas oo xoogaa lacag ah lagu kicin doono.
Tags: dhif ah
Nov 24, 2009 saacadu markay tahay 5:37 PM
Aad baad ugu mahadsantahay kaqeybgalka Doug! Sidaad sheegtay, ugu horreyntii waxaan u mahadnaqaynaa Ilaah. Laakiin sida muhiimka ah, miraha labadeenaba rumaynta Ilaah iyo shaqo adagba waxay si joogto ah noo caddeeyaan sababta aan sidaas ugu ducaysan nahay oo ay tahay inaan u mahadnaqno! Waan ku qanacsanahay saaxiibtinimadaada, taageeradaada iyo taageerada aad ii siiso #indytweetup #indytweetsgiving #tweetsgiving! Waxaad tahay nin wiilasha ka mid ah, aadna waan u bogaadinayaa!
Nov 24, 2009 saacadu markay tahay 6:10 PM
Well Douglas, waadna ku mahadsan tahay inaad wax badan miiska u keentay sannadkan maadooyinkaaga iyo fikradahaaga fiican.
Nov 25, 2009 at 3: 40 AM
Waxaan ahay blogger la shaqeeya ololaha #tweetsgiving ee sanadkan. Waan ka helay qoraalkaaga, gaar ahaan sawirkaaga adiga iyo carruurtaada. Waxay umuuqataa inay sifiican ugu faanayaan aabahood! Waxaan rajeynayaa inaad leedahay mahadnaq aad u wanaagsan!
Nov 25, 2009 saacadu markay tahay 10:59 PM
Hi Doug! Waad ku mahadsantahay boostada. Waad ku mahadsan tahay fursadda aad uga mid noqotay qorayaasha Teknolojiyada Suuqgeynta Blog iyo dhammaan naxariistaada iyo deeqsinimadaada.